Madaxweynihii hore ee Aljeeriya Abdelaziz Bouteflika oo geeriyooday – Idil News
Madaxweynihii hore ee Aljeeriya, Abdelaziz Bouteflika, ayaa geeriyooday kadib markii uu muddo dheer xanuunsanaa isagoo 84 jir ah.
Bouteflika ayaa dalka Aljeeriya hoggaaminayey ku dhawaad ​​labaatan sano, isaga oo xilka ka degay 2019 kadib markii uu u tartamay markiisii ​​shanaad ee xilka uu sababay mudaaharaadyo waaweyn oo waddooyinka ka dhacay.
Wuxuu kaalin muhiim ah ka qaatay dagaalkii xornimada ee Aljeeriya sanadihii 1950 -meeyadii iyo 60 -meeyadii.
Sannadkii 1999 -kii, markii Aljeeriya ka soo baxday dagaal sokeeye oo arxan -darro ah oo ay ku dhinteen ku dhawaad ​​200,000 oo qof, ayuu madaxweyne ka noqday kadib markii ay Milatariga ka dalbadeen.
Bouteflika ayaa marar dhif ah lagu arkay meel fagaare ah tan iyo markii uu istaroog ku dhacay 2013, kaas oo saameeyay hadalkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa.
Xirfadiisa siyaasadeed waxay bilaabatay xilli hore, Ka dib markii ay Algeria xornimada ka qaadatay Faransiiska 1962-kii, wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dunida ugu da’da yar.
Ninka loo yaqaan “Boutef” wuxuu ku guuleystay inuu nabad dhex dhigo ciidanka iyo xoogag Islaamiyiin hubaysan oo la dagaallamayay dagaalladii sokeeye ee dalka.
Sannadkii 2008, wuxuu bilaabay is-beddel ku yimid dastuurka Aljeeriya kaas oo meesha ka saaray xaddiddii labada xilli ee madaxweynayaasha-waxaana si habsami leh dib loogu doortay laba jeer, in kasta oo lagu soo oogay dacwado khiyaano.
Markii lagu dhawaaqay in madaxweynaha xanuunsan uu mar shanaad u tartami doono doorashada 2019, dibad -baxyada ayaa ku faafay dalka oo dhan.